TOOS Taliyaha Cusub ee Ciidanka Puntland oo Tukaraq Gaarey Kuna Dhawaaqay Dagaal Lagu Qabanayo Sool
November 8, 2018 puntlandnews
Puntlandnews.net (Garoowe)-Taliyaha Guud ee ciidamada difaaca Dowladda Puntland Sarreeye Guuto Cabdishukri Cabdullaahi ayaa gaarey jiidaha dagaalka gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukaraq oo ciidamadu fariisimo ku leeyihiin.
Waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo uu sarreeye Guuto Cabdishukri Xilka kagala wareegayey taliyihii hore ee ciidamada difaaca Sarreeye Guuto Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) oo u taagan xilka madaxtinimada Puntland.
Xil wareejinta kadib waxa uu taliyaha cusub jeediyey khudbad kooban oo uu kaga hadlay qaabka uu u shaqayn doono qorshayaasha uga degan ciidamada iyo xuquuqdooda iyo xaaladda guud ee Puntland ay ku sugan tahay.
Sarreeye Guuto Cabdishukri ayaa sheegay in laga bilaabo saacadda uu xilka la wareegey ciidamada difaaca dowladda Puntland isu diyaariyaan dagaal ay ku xoraynayaan deegaamada ka maqan gacanta dowladda Puntland.
HALKAAN RIIX SI AAD U DAAWATO MUUQAALKA
Taliyaha ayaa wuxuu sheegay inuusan aqbali doonin in Somaliland ay gacanta ku siihayso magaalada Laascaanood iyo deegaamada kale ee ay kaga sugan tahay Puntland, wuxuuna ciidanka siiyey diyaar garaw dagaal.